ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမည့်သူများအား အင်းစိန်ထောင်ဝတွင် စောင့်ဆိုင်းနေသော မိသားစုဝင်များ (ဓာတ်ပုံ - AT Hlaing)
နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ အများဆုံးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အသီးသီးက အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို ဒီနေ့ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှာ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ ဒီကနေ့ ပြန်လွတ်လာသူတချို့က ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့ ဒီသတင်းကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦး. ပြောပြပေးမှာပါ။
နိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးကနေ ဒီနေ့ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့ အကျဉ်းသားအရေအတွက်ဟာ စုစုပေါင်း ၂၂၉၆ ယောက်ရှိတယ်လို့ စစ်ကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လူ့ခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိကြောင်း ဒီနေ့ပြန်လွတ်လာတဲ့ လူငယ်တဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
" လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထဲထဲမှာဘာမှ အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ ဒီ ၅၀၅ တွေကို သီးသန့်မှာထားပြီးတော့ အထဲထဲမှာ ဘာမှပြောခွင့်လည်းမရှိဘူး တင်ပြခွင့်လည်းမရှိဘူး။ ဘာဆို ဘာတခုမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ သူတို့က ကိုယ်တင်ပြချက်ကိုလည်း အသိအမှတ်မပြုဘူး။"
ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ ပြန်လွှတ်မယ်လို့ ကနဦး သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်လွှတ်မယ့် အရေအတွက်ကို အခုမနက်ပိုင်းမှ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက စိစစ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီအတွက်ကြောင့် အချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းအထိ အကျဉ်းသားတွေကို ပြန်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ ဒီနေ့အခြေအနေကို တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ဇာလီအေးက ပြောပြပါတယ်။
“ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကတော့ ထုတ်ပြောတာကတော့ ကျမကို ၇၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်လို့ ပြောပါတယ်။ လွှတ်မယ့်အချိန်ကို သူတို့အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။ အထဲက ပြောတာကတော့ ဒီနေ့မနက် ၇နာရီလောက်မှ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လက်ထဲကို လွှတ်မယ့်သူရဲ့ စာရင်းပေါ့နော် ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် စိစစ်နေရတယ်ပေါ့နော်။”
ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်အပြင် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား၊ ချင်းပြည်နယ် ဟားခါး၊ မန္တလေး အိုးဘို၊ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ် စတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေရှေ့မှာလည်း မိသားစုဝင်တွေက ပြန်လွတ်လာသူတွေကို ညနေပိုင်းအထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။
အများစုက စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပြီး ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ပဲ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်က ဖမ်းဆီးခံလူငယ်တွေရဲ့အမှုကို လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ "သင့်အတွက်ရှေ့နေများအဖွဲ့" က တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်သွယ်သွယ်စိုးက ပြောပါတယ်။
“ ( ရန်ကုန်က) ၇၅၀ လို့တော့ထပ်ကြားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မနက်တုန်းက ကြားတုန်းကတော့ ၇၂၀ ကြားတာ။ ဒီအင်းစိန်ထောင်ကနေ လွှတ်တာဆိုရင် ဒါ ၄ ကြိမ်မြောက်။ အများစုက ၅၀၅- က၊ လက်နက်တွေ မပါတဲ့သူတွေပေါ့နော် အဓိကထားပြီး လွှတ်တယ်လို့ကြားတယ်။ ပြီးရင် သွားရင်းလာရင်း ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ သူတွေပေါ့။”
ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်က ပြန်လွတ်လာသူ ၇၂၁ ဦး ရှိခဲ့တာမှာ ပြန်လွတ်လာသူအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေဆီ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ခွဲပို့ပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
“ ထောင်ကနေလွှတ်ရင် လူအင်အားများပြီး ထောင်ရှေ့မှာဟို အစုအဝေး ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေကို ကျနော်တို့ ဒီ YBS တွေနဲ့တင်ပြီး ခေါ်သွားပေးမှာပေါ့။ အဲဒီရဲစခန်းတွေကပဲ သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုတွေက လာခေါ်ကြရမှာ။ Confirm ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ကျနော်တို့ အတည်ပြုပြီးပါပြီ။”
စစ်တပ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နောက်ပိုင်းမှာ လူပေါင်း ၆၄၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၂၀၀ ကျော်ကိုတော့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
တချို့က စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရပြီးမှ အကျဉ်းထောင်ကို ရောက်လာကြတာပါ။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြန်လွတ်လာသူတွေက ပြောဆိုနေတာလည်း ရှိပါတယ်။
AAPP ရဲ့ မှတ်တမ်းနှင့် သုတေသနဌာနက ဦးစံမင်းကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုအခြေအနေဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ ပြောပါတယ်။
“ မည်သူတဦးတယောက်ကိုမှ လက်လွတ်စပယ် ဖမ်းပြီးတော့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေက လုပ်စရာကိုအကြောင်း မရှိတာလေ။ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်တွေကို အကုန်လုံးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ ကိစ္စကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ်ဖြစ်နေတာပါ မြန်မာပြည်မှာ။”
၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင် ၂၄ ယောက်ကိုလည်း အမှုရုပ်သိမ်းကြောင်း စစ်ကောင်စီက မနေ့ကကြေညာခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြလှုံ့ဆော်မှုတွေ ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသွားမယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ သတိပေး ရေးသားထားပါတယ်။ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံထားရသူလည်း ၂,၀၀၀ နီးပါး ရှိနေပါတယ်။
ဆန်ဒပွမှုနဲ့ဆကျစပျတဲ့ ၅၀၅(က) စှဲဆိုခံထားရသူအမြားစု ပွနျလှတျ
နိုငျငံတျောအကွညျညိုပကျြစမှေုပုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမြားဆုံးဖမျးဆီးခံရတဲ့ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျ အသီးသီးက အကဉျြးသား ၂၀၀၀ ကြျောကို ဒီနဇှေ့နျလ ၃၀ ရကျမှာ ပွနျလှတျပေးလိုကျပါတယျ။ အကဉျြးထောငျအတှငျး လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှရှေိတယျလို့ ဒီကနေ့ ပွနျလှတျလာသူတခြို့က ပွောပါတယျ။ ဒီအကွောငျး ရနျကုနျကပေးပို့လာတဲ့ ဒီသတငျးကိုတော့ ကိုသားညှနျ့ဦး. ပွောပွပေးမှာပါ။
နိုငျငံတဝနျးမှာရှိတဲ့ အကဉျြးထောငျအသီးသီးကနေ ဒီနပွေ့နျလှတျလိုကျတဲ့ အကဉျြးသားအရအေတှကျဟာ စုစုပေါငျး ၂၂၉၆ ယောကျရှိတယျလို့ စဈကောငျစီ သတငျးထုတျပွနျရေးအဖှဲ့က ထုတျပွနျလိုကျတာပါ။
အကဉျြးထောငျထဲမှာ လူ့ခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှရှေိကွောငျး ဒီနပွေ့နျလှတျလာတဲ့ လူငယျတဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
" လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ပတျသကျပွီး အထဲထဲမှာဘာမှ အခှငျ့အရေးမရှိဘူး။ ဒီ ၅၀၅ တှကေို သီးသနျ့မှာထားပွီးတော့ အထဲထဲမှာ ဘာမှပွောခှငျ့လညျးမရှိဘူး တငျပွခှငျ့လညျးမရှိဘူး။ ဘာဆို ဘာတခုမှလုပျခှငျ့မရှိဘူး။ သူတို့က ကိုယျတငျပွခကျြကိုလညျး အသိအမှတျမပွုဘူး။"
ဒီနမေ့နကျအစောပိုငျးမှာ ပွနျလှတျမယျလို့ ကနဦး သတငျးတှေ ထှကျပျေါခဲ့ပမေဲ့ ပွနျလှတျမယျ့ အရအေတှကျကို အခုမနကျပိုငျးမှ ထောငျအာဏာပိုငျတှကေ စိစဈမှုတှလေုပျခဲ့ရတာပါ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ အခြိနျကွနျ့ကွာမှုတှဖွေဈခဲ့ပွီး ညနပေိုငျးအထိ အကဉျြးသားတှကေို ပွနျမလှတျနိုငျခဲ့ကွောငျး အငျးစိနျထောငျရဲ့ ဒီနအေ့ခွအေနကေို တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဒျေါဇာလီအေးက ပွောပွပါတယျ။
“ အငျးစိနျအကဉျြးထောငျကတော့ ထုတျပွောတာကတော့ ကမြကို ၇၅၀ ပတျဝနျးကငျြလို့ ပွောပါတယျ။ လှတျမယျ့အခြိနျကို သူတို့အတိအကြ မပွောနိုငျဘူး။ အထဲက ပွောတာကတော့ ဒီနမေ့နကျ ၇နာရီလောကျမှ ထောငျဝနျထမျးတှရေဲ့ လကျထဲကို လှတျမယျ့သူရဲ့ စာရငျးပေါ့နျော ရောကျတာဖွဈတဲ့အတှကျ စိစဈနရေတယျပေါ့နျော။”
ရနျကုနျအငျးစိနျထောငျအပွငျ ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနား၊ ခငျြးပွညျနယျ ဟားခါး၊ မန်တလေး အိုးဘို၊ တနင်ျသာရီတိုငျး ထားဝယျ၊ ဧရာဝတီတိုငျး ပုသိမျ စတဲ့အကဉျြးထောငျတှရှေမှေ့ာလညျး မိသားစုဝငျတှကေ ပွနျလှတျလာသူတှကေို ညနပေိုငျးအထိ စောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရတာပါ။
အမြားစုက စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရသူတှဖွေဈပွီး ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ပဲ အမှုဖှငျ့ ဖမျးဆီးခံရတာဖွဈကွောငျး ရနျကုနျက ဖမျးဆီးခံလူငယျတှရေဲ့အမှုကို လိုကျပါကူညီပေးနတေဲ့ "သငျ့အတှကျရှနေ့မြေားအဖှဲ့" က တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဒျေါသှယျသှယျစိုးက ပွောပါတယျ။
“ ( ရနျကုနျက) ၇၅၀ လို့တော့ထပျကွားတယျ၊ ဒါပမေဲ့ မနကျတုနျးက ကွားတုနျးကတော့ ၇၂၀ ကွားတာ။ ဒီအငျးစိနျထောငျကနေ လှတျတာဆိုရငျ ဒါ ၄ ကွိမျမွောကျ။ အမြားစုက ၅၀၅- က၊ လကျနကျတှေ မပါတဲ့သူတှပေေါ့နျော အဓိကထားပွီး လှတျတယျလို့ကွားတယျ။ ပွီးရငျ သှားရငျးလာရငျး ဖမျးဆီးခံရတဲ့ သူတှပေေါ့။”
ရနျကုနျအငျးစိနျထောငျက ပွနျလှတျလာသူ ၇၂၁ ဦး ရှိခဲ့တာမှာ ပွနျလှတျလာသူအားလုံးကို သကျဆိုငျရာ မွို့နယျရဲစခနျးတှဆေီ ဘတျဈကားနဲ့ ခှဲပို့ပွီး ပွနျလှတျပေးခဲ့တာလို့ ရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျမွငျ့က ပွောပါတယျ။
“ ထောငျကနလှေတျရငျ လူအငျအားမြားပွီး ထောငျရှမှေ့ာဟို အစုအဝေး ဖွဈမှာစိုးလို့ပါ။ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျရဲစခနျးတှကေို ကနြျောတို့ ဒီ YBS တှနေဲ့တငျပွီး ချေါသှားပေးမှာပေါ့။ အဲဒီရဲစခနျးတှကေပဲ သကျဆိုငျရာ မိသားစုတှကေ လာချေါကွရမှာ။ Confirm ဖွဈသှားပွီပေါ့နျော။ ထောကျလှမျးရေးနဲ့ ကနြျောတို့ အတညျပွုပွီးပါပွီ။”
စဈတပျက ဖဖေျောဝါရီ ၁ရကျနောကျပိုငျးမှာ လူပေါငျး ၆၄၀၀ ကြျောကို ဖမျးဆီးခဲ့ပွီး ၂၀၀ ကြျောကိုတော့ ထောငျဒဏျခမြှတျခဲ့ကွောငျး နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား ကူညီ စောငျ့ရှောကျရေးအသငျး AAPP က ထုတျပွနျပါတယျ။
တခြို့က စဈကွောရေးစခနျးတှမှော စဈဆေးမေးမွနျးခံရပွီးမှ အကဉျြးထောငျကို ရောကျလာကွတာပါ။ အကဉျြးထောငျထဲမှာ နှိပျစကျညှငျးပနျးမှုတှေ ရှိနတေယျလို့ ပွနျလှတျလာသူတှကေ ပွောဆိုနတောလညျး ရှိပါတယျ။
AAPP ရဲ့ မှတျတမျးနှငျ့ သုတသေနဌာနက ဦးစံမငျးကတော့ ပွညျသူတှရေဲ့ လုံခွုံမှုအခွအေနဟော စိုးရိမျရမှေတျအဆငျ့ကို ရောကျရှိနပွေီလို့ ပွောပါတယျ။
“ မညျသူတဦးတယောကျကိုမှ လကျလှတျစပယျ ဖမျးပွီးတော့ ညှငျးပနျးနှိပျစကျတာတှကေ လုပျစရာကိုအကွောငျး မရှိတာလေ။ အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေး ရပိုငျခှငျ့တှကေို အကုနျလုံးခြိုးဖောကျခံရတဲ့ ကိစ်စကွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါတှဟော တကယျဖွဈနတောပါ မွနျမာပွညျမှာ။”
၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖှငျ့ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျ ၂၄ ယောကျကိုလညျး အမှုရုပျသိမျးကွောငျး စဈကောငျစီက မနကေ့ကွညောခဲ့ပွီး ဆန်ဒပွလှုံ့ဆျောမှုတှေ ထပျလုပျမယျဆိုရငျတော့ ထိထိရောကျရောကျ အရေးယူသှားမယျလို့ ကွညောခကျြမှာ သတိပေး ရေးသားထားပါတယျ။ ဖမျးဝရမျး ထုတျခံထားရသူလညျး ၂,၀၀၀ နီးပါး ရှိနပေါတယျ။